ဘာပိုင်ဆိုင်မှုမှ မရှိတော့ရင်တောင် ပရိတ်သတ်တွေရှိနေတာက ဘုရားပေးတဲ့ ဆုလဘ်ပါဆိုတဲ့ ထက်ထက်မိုးဦး – CharTake
chartake | October 29, 2020 | Cele News | No Comments
မင်္ဂလာပါ ပရိတ်သတ်ကြီးရေ … တစ်ခောတ်တစ်ခါက လူကြိုက်များပြီး အရမ်းအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ မင်းသမီးကြီး ထက်ထက်မိုးဦး ကိုတော့ အထူးမိတ်ဆက်ပေးဖို့ လိုမယ်မထင်ပါဘူးနော် ။ သူမက သူမလက်ရှိ ခံစားနေရတဲ့ အကြောင်းလေးကို အခုလို ရင်ဖွင့်ထားပါတယ် ။
” ထက် မငိုတော့ဘူးနော် ။ ပရိသတ်တွေကထက်ကိုမငိုပါနဲ့တော့တဲ့ ချစ်စရာကောင်းပြီး ပြုံးပြုံးလေး နေရမယ်နော်တဲ့ ။ ထက်လဲ ဘယ်ငိုချင်ပါ့မလဲ … ဒါပေမယ့် ထက်ရဲ့ ဘဝမှာ အချိုးအကွေ့တွေများလွန်းတယ်။ ငိုတခါ ရယ်တလှည့်နဲ့ တခါတလေ ကိုယ့်ဘဝဇာတ်လမ်း ကိုယ်ပြန်ကြည့်နေ ရသလိုပဲ။
ဒီအကယ်ဒမီရုပ်လေး ၂ ရုပ် ပြန်ကြည့်မိတိုင်း အကယ်ဒမီ ထက်ထက်မိုးဦး ရဲ့ပရိသတ်တွေ အများကြီး ရှိတယ်ဆိုပြီး တွေးလိုက်ရင် အားတွေ ရှိသွားရော။ အနုပညာ သက်တမ်းနှစ် ၃၀ ကျော်လုံး ထက်ဘေးမှာ အမြဲတမ်းရှိနေပေးခဲ့တာ အကယ်ဒမီရုပ် ၂ ရုပ် နဲ့ ထက်ဘာတွေပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ အချိန်တိုင်း လက်ခံပေးနေတဲ့ ပရိသတ်ပဲ။
ထက်မှာ ဘာမှ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ မရှိတော့ရင်တောင် ထက်ပရိတ်သတ်တွေ ရှိနေတယ်လေနော် …. ဒါက ဘုရားပေးတဲ့ ဆုလာဘ်တခုပေါ့ ။ ထက်လည်း ခုထက် ပိုကြိုးစားမယ်နော်။ ထက်ကိုလည်း ပိုချစ်ပေးကြပါ။ ထက်ကြော်ငြာတာတွေကို လည်းအားပေးကြပါလို့ နော် ….. ” ဆိုပြီး ရေးသားထားပါတယ်။ အချိန်ပေးဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးကိုလည်း ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်နော် ။ Source ; Htet Htet Moe Oo Fb’
Unicode … အကယျဒမီရုပျလေး ၂ရုပျ ပွနျကွညျ့မိတိုငျး ထကျရဲ့ပရိသတျတှေ အမြားကွီး ရတယျဆိုပွီးတှေးလိုကျရငျ အားတှရေသှားတယျဆိုတဲ့ အကယျဒမီ ထကျထကျမိုးဦး
မင်ျဂလာပါ ပရိတျသတျကွီးရေ … တဈခောတျတဈခါက လူကွိုကျမြားပွီး အရမျးအောငျမွငျခဲ့တဲ့ မငျးသမီးကွီး ထကျထကျမိုးဦး ကိုတော့ အထူးမိတျဆကျပေးဖို့လိုမယျမထငျပါဘူးနျော ။ သူမက သူမလကျရ ခံစားနရေတဲ့ အကွောငျးလေးကို အခုလို ရငျဖှငျ့ထားပါတယျ ။
” ထကျ မငိုတော့ဘူးနျော ။ ပရိသတျတှကေထကျကိုမငိုပါနဲ့တော့တဲ့ ခဈြစရာကောငျးပွီး ပွုံးပွုံးလေး နရေမယျနျောတဲ့ ။ ထကျလဲ ဘယျငိုခငျြပါ့မလဲ … ဒါပမေယျ့ ထကျရဲ့ ဘဝမာ အခြိုးအကှတှေ့မြေားလှနျးတယျ။ ငိုတခါ ရယျတလညျ့နဲ့ တခါတလေ ကိုယျ့ဘဝဇာတျလမျး ကိုယျပွနျကွညျ့နေ ရသလိုပဲ။
ဒီအကယျဒမီရုပျလေး ၂ ရုပျ ပွနျကွညျ့မိတိုငျး အကယျဒမီ ထကျထကျမိုးဦး ရဲ့ပရိသတျတှေ အမြားကွီး ရတယျဆိုပွီး တှေးလိုကျရငျ အားတှေ ရသှားရော။ အနုပညာ သကျတမျးနဈ ၃၀ ကြျောလုံး ထကျဘေးမာ အမွဲတမျးရနပေေးခဲ့တာ အကယျဒမီရုပျ ၂ ရုပျ နဲ့ ထကျဘာတှပေဲဖွဈခဲ့ဖွဈခဲ့ အခြိနျတိုငျးလကျခံပေးနတေဲ့ ပရိသတျပဲ။
ထကျမာ ဘာမ ပိုငျဆိုငျမတှေ မရတော့ရငျတောငျ ထကျပရိတျသတျတှေ ရနတေယျလနေျော …. ဒါက ဘုရားပေးတဲ့ ဆုလာဘျတခုပေါ့ ။ ထကျလညျး ခုထကျ ပိုကွိုးစားမယျနျော။ ထကျကိုလညျး ပိုခဈြပေးကွပါ။ ထကျကွျောငွာတာတှကေို လညျးအားပေးကွပါလို့ နျော ….. ” ဆိုပွီး ရေးသားထားပါတယျ။ အခြိနျပေးဖတျရပေးတဲ့ ပရိတျသတျကွီးကိုလညျး ကြေးဇူးအထူးတငျပါတယျနျော ။ Source ; Htet Htet Moe Oo Fb’